Technology Blogs zvakakosha kuti Martech Zone. Kana ini ndanyora nezvekuti chaiyo tekinoroji iri kukanganisa sei kushambadzira, inowanzo kukurudzirwa nehunyanzvi blog. Ivo vanowanzoita basa rakakura kuvhara nhau uye maonero nezve tekinoroji, asi vachipotsa pane anoshanda ekushambadzira mashandisiro acho.
2 Kutongwa kana Kuderera - Kunyangwe ipfupi pane zvaChip zvinyorwa, shamwari Bill Dawson anoramba ari kumberi kwetekinoroji uye anopa dzimwe tsananguro dzepithy.
Dzimwe nguva mablog haashaye iwo akataridzika kutarisa uye kunzwa - asi zvirimo zvinogara zviripo! Wedzera aya mablog kune ako feed feed uye ini ndine chivimbo kuti hauzonyadziswe.
Jan 29, 2010 na7:24 PM
Wow, thanks, Doug! Ndine rukudzo kuverengerwa mune yakadai runyorwa - kunyanya nevanofarira vaJeff Atwood.